सरकारको आत्मरति र जनताको भोगाई| Nepal Pati
सरकारको आत्मरति र जनताको भोगाई
सरकारका कामकारवाहि र जनताका अपेक्षाबीचको फराकिलो अन्तरको कारणले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै गएको पाईन्छ । जनताका अपेक्षा पुरा हुने किसिमका काम सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । सरकार जनताको पक्षमा राम्रा काम भईरहेका छन भनिरहेको छ । तर जनता त्यसमा विश्वास गर्न तयार छैनन् । किनभने उनिहरुले सरकारको दावि अनुसारका कामको प्रतिफल देखिरहेका छैनन् । त्यसबाट लाभ पाईरहेका छैनन् र सुबिधा उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । सरकारको भनाई र जनताको भोगाईकावीचको यस्तो भारी अन्तरले नै सरकार एकातिर राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर आफै मख्ख छ भने अर्कोतिर जनताको असन्तुष्टि र निराशा घनिभूत हुदै गएको छ । जनताका यी असन्तुष्टि र निराशा बेलाबखत सडकमा डरलाग्दो किसिमले बिष्फोटन हुन समेत थालेका छन् । यो स्थिति प्रति सरकार गम्भिर हुनु पर्दछ । अन्यथा सरकारले कुनै दिन गम्भिर संकट व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।
बलियो बहुमतको सरकार बनेको डेढ बर्ष नपुग्दै व्यवस्था नै उल्ट्याउने कसरत अध्यारो कोठामा हुँदै गरेको सरकारले महशुस गरे जस्तो देखिन्छ । राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फर्काउने आवाज उठ्नु र सरकारले सर्र्वदलीय बैठक बोलाई संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आउनुले नेपालको राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको संकेत देखा परेको पुष्टि हुँदैछ । यसले सरकारका काम कारबाहि ठिक नभएको कुराको पनि पुष्टि गर्दछ । तर बैठक बोलाएर निर्णय गर्दैमा यस्तो गम्भिर समस्याको समाधान निस्कने होईन । समाधानको लागि सरकारको जनता र विकास प्रतिको समग्र दृष्टिकोण, कार्यशैली, व्यवहार र आचरण नै बदल्नु पर्दछ ।
डेढ बर्षको आफ्नो कामकार्बाहीबाट आम जनताले व्यवहारमा के पाए ? उनका पीडा कति घटे? दैनिक जीवनमा के कस्तो परिबर्तन र सुधार आयो भन्ने कोणबाट सरकारले आफ्नो कामकारबाहिको मुल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । यो कोणबाट हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण र कामकारबाहि तथा जनताको अवस्था र दैनिकी भोगाईबीच आकाश र धर्ती जत्तिकै अन्तर देखिने छ । यसो भएपछि जनता किन असन्तुष्ट र निरास नहोउन् भन्ने कुरा महशस हुने छ ।
आम जनता आफ्ना पुस्तौ देखिका सडक, पिउने पानी, सिंचाई, स्वास्थ्योपचार, बालबच्चाको पढाई, बेरोजगारी, गरिबी, आदि समस्याबाट पीडित हुदै आएका छन् र पछिल्लो कालमा जनता आफ्ना हुर्केका छोरा छोरीहरुले स्वदेशमै रोजगारी पाउन् भन्ने चाहान्छन् । तर यी कुनै पनि कुरामा जनताले सुधार र परिवर्तन भएको कतै पनि कुनै छनक पाईरहेका छैनन् । सबै कुरा यथावत छ । जनस्तरमा सुधारको अनुभूति कतै पनि भईरहेको छैन । यस्ता जनता नै कम्युनिष्ट पार्टीका धरोहर र मतदाता हुन् । तर यिनै जनता आज असन्तुष्ट र निरास बन्दै गएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी प्रति यस्ता जनताको मोहभङ्ग भयो भने त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा कहिल्यै टाउको उठाउन सक्ने छैन ।
स्थानीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न सरकारहरु बनेका छन् । अलि माथि प्रदेश सरकार छन् । तर ती मध्य अधिकांश सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जनताका सुख सुविधातर्फ भन्दा आफु र आफ्नाको सुख सुविधातर्फ केन्द्रित भएका सन्देशहरु प्रवाह भईरहेका छन् । गाडि सुविधा, तलब भत्ताको व्यवस्था, भ्रमण, स्वकीय सचिव, ल्यापटप आदिमा उनिहरुको ध्यान गईरहेको सन्देश आम रुपमा प्रवाह भईरहेको छ । साथै उपलब्ध साधनको दुरुपयोग र बेरुजु थुप्रन थालेका सन्देशहरु प्रवाह भईरहेका छन् । निर्माण विकासका कामबाट जनप्रतिनिधिहरु स्वयमले नै कमाउन थालेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका काम कामकारबाहीहरुको सम्बन्धमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सन्देशहरु बढी आईरहेका छन् ।उनिहरुले लगाएका करले जनता उत्तिकै पीडित भएका छन् । यसले पनि जनतालाई निराश बनाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा संघीयता विरुद्ध नै मानिसहरुले औंला उठाउन थालेका छन् ।त्यसैले संघीयता मात्र होईन सिङ्गै व्यवस्थालाई स्थायित्व दिई सुदृढ तुल्याउन पनि जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको यो प्रवृृत्तिमा लगाम लगाउन जरुरी भएको छ । निर्वाचनमा मानिसको राजनीतिक निष्ठा, ईमान्दारिता र पृष्टभूमिको विचार नगरी जथाभावि टिकट दिंदाको परिणाम अहिले देशले भागिरहेको छ । यो शीर्ष नेतृत्व तहको कमजोरी हो । साथै स्थानीय सरकारका कामकारबाहि बारेका समाचार आउँदा कुन सरकारमा कुन पार्टीको वर्चश्व छ भन्ने कुरा उल्लेख नगरी आउने हुँदा त्यसको दोष केन्द्रमा सत्तासीन पार्टीमा जाने हुन्छ । तर यस्ता गैह्र जिम्मेवार कामहरु सामान्यतया कम्युनिष्ट जनप्रतिनिधिहरुबाट हुदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
जहाँसम्म केन्द्रको कुरा छ उसको विकास सम्बन्धि सोच नै आम नेपाली जनताको अवस्था अनुकुलको भएन । आम नेपाली जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका माथि उल्लेखित कठिनाई, पीडा र समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको पहिलो ध्यान जानु पर्दथ्यो । जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका पिउने पानीका समस्या, सिंचाईका समस्या, ग्रामीण सडकका समस्या, ईन्धनका समस्या, बिद्यालय भवन र शिक्षक अभावका समस्या, चिकित्सक र औषधिसहितका स्वास्थ्य केन्द्रका समस्या, विद्युत आपूर्तिको समस्या, कृषिको मल, उन्नत बिउ, कर्जा, औजार र प्राविधिक ज्ञानको अभावको समस्या, कृषि उत्पादनको बजारको समस्या, बेरोजगारी आदिको समस्या समाधान गर्ने एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाईनु पर्दथ्यो । त्यसमा केन्द्रबाट उपलब्ध गराईनु पर्ने सेवा, सुबिधा, बजेट, प्राविधिक ज्ञान, अनुगमन आदितत्परताका साथ उपलब्ध गराईनु पर्दथ्यो । तर यी कुनै पनि कुरामा सरकारले परम्परा त्याग्न सकेन र पहिलेकै असफल बाटोमा लाग्ने निधो गर्यो । साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कुनै छलफल, बहस र बिमर्शको आबश्यकता नै ठानिएन । हिड्दै आएको बाटोलाई नै पछ्याउने कामभयो । त्यँहि नेर गंभिर गल्ति भएको छ ।
सहर र त्यसका आसपासका क्षेत्रका सडकको बेहाल अवस्था, ठुलठूला खाल्डा, हिउँदमा कुहिरी मण्डल धुलो र वर्षामा हिलोका पोखरी, विस्तारको नाममा भत्काएर बर्षौदेखि अलपत्र छोडिएका महत्वपूर्ण दर्जनौं सडकले सहरी जीवनको दुर्दशाको रामकहानी बताईरहेका थिए । त्यो अबस्थाबाट आम जनता अत्तालिएर आकुलव्याकुल भएका थिए । सरकारको पहिलो ध्यान त्यस्ता महत्वपूर्ण सडकको तदारुकताका साथनिर्माण, मर्मत र सुधारमा जानु पर्दथ्यो । त्यसो नगरी सरकार पानीजहाज, रेल, पाईपबाट घर घरका चुलामा ग्यास आदि विकासले गति लिएमा ३०/४०वर्ष पछि सान्दर्भिक हुने कुराको गफदिने कुरामा लाग्यो र एकथरि मानिसले त्यसैलाई वाह! क्या दुरदृष्टि भनेर ताली पिटे । तर त्यसले जनतालाई छोएन, छुने कुरा पनि थिएन ।जनता त वर्तमानमा सामना गरिरहेका कठिनाईहरुबाट पीडित थिए ।
यी कुराको अतिरिक्त आम जनता सरकारसङ्ग असन्तुष्ट हुनुका अरु पनि थुप्रै कारण छन् । जस्तो कि वर्तमान र पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सरकारले बढाउँदै लगेको सुविधाबाट बढ्दै गएको उनिहरुको रोब-रवाफ र सानलाई जनताले राम्रो मानिरहेका छैनन् । किनभने जनताले केहि पाएका छैनन् । संदिग्ध स्राेतबाट रातारात नवधनाढ्य बनेकाहरु सङ्ग शीर्ष नेतृत्वको बढ्दो हिमचिम पनि जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन् ।
निर्वाचित गराउने सामान्य जनता तर सेवा गर्ने धनाढ्यहरुको भनेर उनिहरुको मन कुँडिएको छ । मेगा आर्थिक घोटालाहरु प्रति कम्युनिष्ट नेतृत्वको नरम रवैया देखेर जनता अवाक भएका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा जस्ता प्रकारका मानिसहरु नियुक्त हुने गरेका छन् त्यसमा पनि जनताले गम्भीर खोट देखेका छन् । सरकारका काम कारबाहिहरुको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरु विरुद्ध सरकारको ओठे र रुखो जवाफबाट पनि जनता उत्तिकै चिढिएका छन् । यी र यस्तै कुरामा सरकार गम्भीर बनोस् र जनता प्रति संवेदनशील भई उनिहरुलाई सेवा सुविधा पुर्याउने काममा ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने कामना गर्नु बाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र !